Pixel3မှာပါဝင်မယ့် Gmail, photos နဲ့ drive ပုံစံဒီဇိုင်းသစ်များ ပေါက်ကြားလာ – Myanmar Mobile App
Posted on July 29, 2018 July 29, 2018 Author Swe Yee Latt	Comment(0)
Google က Android app တွေကို ဒီဇိုင်းတွေပြောင်းတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ထွက်ရှိမယ့် Pixel3series မှာ Android P နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ဒီဇိုင်းအဆန်းလေးတွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Google apps တွေဖြစ်တဲ့ Gmail, Google Photos, Google Drive, and Google Trips တွေကို လှပတဲ့ Material Design တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံတွေအတိုင်း ခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ app ရဲ့ current version နဲ့ Material Design ကိုယှဉ်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Google ကတော့ ရိုးရှင်းပြီး လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းသစ်ဘက်ကို ဦးစားပေးထားပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကာလာတွေနဲ့ UI တွေကို ပြောင်းလဲထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Gmail app က သူ့ရဲ့ ဘေးအနားသတ်က အနီရောင်တွေအစား အဖြူရောင်ကို သုံးထားပါတယ်။ ထိပ်မှာတော့ Gmail experience တွေကို ထားရှိပေးထားပြီး ပိုပြီးအဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ သိသိသာသာပြောင်းလဲထားတာကတော့ menu နဲ့ search icon ကို အရင်တုန်းက ထိပ်မှာထားပေမဲ့ ခုအသစ်မှာတော့ အောက်ဘက်ကို ပြောင်းလိုက်တာပါ။ အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တာက သုံးရတာ ပိုလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပြီး one-handed mode သုံးတဲ့သူတွေအတွက်လဲ သုံးရတာ အဆင်ပြေစေမှာပါ။ Android P မှာတော့ အရင်တုန်းက သုံးလာတာကြာတဲ့ Android version တုန်းက iconic navigation တွေကို ဖယ်ရှားပြစ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောက်ဘက်ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ menu က သုံးရတာ အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပြီး သင်ရောက်ရှိနေတဲ့ page ပေါ်မူတည်ပြီး additional element တွေကိုလဲ တွေ့ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Google Photos မှာတော့ အရင်တုန်းကလို အရောင်စုံတွေမဟုတ်တော့ဘဲ အဖြူရောင်ပြောင်းပေးထားပါတယ်။ အရောင်တွေကို ရွေးချယ်ချင်ရင်လဲ ရွေးချယ်စရာ အရောင်တွေပါဝင်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလိုပြောင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကြည့်ရတာ ပိုပြီး ရှင်းလင်းပြီး အမြင်အေးစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Google Drive မှာတော့ အရင်တုန်းက tab bar ကို အောက်ခြေမှာ ထားရှိ်ပြီးတော့ ခုတော့ ဆန်းသစ်သွားအောင် ထိပ်ဘက်မှာ ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
Google Trips မှာလဲ အဖြူရောင်ကို အဓိကထားသုံးထားပြီး search bar ကိုထိပ်မှာ ထားရှိပေးထားပါတယ်။ ခုလိုဒီဇိုင်းပြောင်းထားတာတွေကို user တွေထဲဘယ်ချိန်ရောက်မယ် ဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာပြောပြ ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Google ကတော့ သူ့ရဲ့ ဒီဇိုင်းအသစ်တွေကို နောက်ထွက်ရှိမဲ့ Android P မှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထွက်ရှိမဲ့ Google Pixel3မှာစတင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Google က Android app တှကေို ဒီဇိုငျးတှပွေောငျးတော့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အသဈထှကျရှိမယျ့ Pixel3series မှာ Android P နဲ့ ကိုကျညီမယျ့ ဒီဇိုငျးအဆနျးလေးတှကေို ထညျ့သှငျးအသုံးပွုမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Google apps တှဖွေဈတဲ့ Gmail, Google Photos, Google Drive, and Google Trips တှကေို လှပတဲ့ Material Design တှအေဖွဈပွောငျးလဲသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အောကျမှာပွထားတဲ့ ပုံတှအေတိုငျး ခုလကျရှိသုံးနတေဲ့ app ရဲ့ current version နဲ့ Material Design ကိုယှဉျပွထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Google ကတော့ ရိုးရှငျးပွီး လှပတဲ့ ဒီဇိုငျးသဈဘကျကို ဦးစားပေးထားပါတယျ။ ဒီဇိုငျးကာလာတှနေဲ့ UI တှကေို ပွောငျးလဲထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပွောရမယျဆိုရငျတော့ Gmail app က သူ့ရဲ့ ဘေးအနားသတျက အနီရောငျတှအေစား အဖွူရောငျကို သုံးထားပါတယျ။ ထိပျမှာတော့
Gmail experience တှကေို ထားရှိပေးထားပွီး ပိုပွီးအဆငျပွအေောငျ လုပျပေးထားပါတယျ။ သိသိသာသာပွောငျးလဲထားတာကတော့ menu နဲ့ search icon ကို အရငျတုနျးက ထိပျမှာထားပမေဲ့ ခုအသဈမှာတော့ အောကျဘကျကို ပွောငျးလိုကျတာပါ။ အဲ့လိုပွောငျးလိုကျတာက သုံးရတာ ပိုလှယျကူစမှောဖွဈပွီး one-handed mode သုံးတဲ့သူတှအေတှကျလဲ သုံးရတာ အဆငျပွစေမှောပါ။ Android P မှာတော့ အရငျတုနျးက သုံးလာတာကွာတဲ့ Android version တုနျးက iconic navigation တှကေို ဖယျရှားပွဈမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အောကျဘကျကို ပွောငျးလိုကျတဲ့ menu က သုံးရတာ အဆငျပွစေမှော ဖွဈပွီး သငျရောကျရှိနတေဲ့ page ပျေါမူတညျပွီး additional element တှကေိုလဲ တှရေ့ဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Google Photos မှာတော့ အရငျတုနျးကလို အရောငျစုံတှမေဟုတျတော့ဘဲ အဖွူရောငျပွောငျးပေးထားပါတယျ။ အရောငျတှကေို ရှေးခယျြခငျြရငျလဲ ရှေးခယျြစရာ အရောငျတှပေါဝငျလာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခုလိုပွောငျးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ ကွညျ့ရတာ ပိုပွီး ရှငျးလငျးပွီး အမွငျအေးစမှောပဲ ဖွဈပါတယျ။
Google Drive မှာတော့ အရငျတုနျးက tab bar ကို အောကျခွမှော ထားရှိပွီးတော့ ခုတော့ ဆနျးသဈသှားအောငျ ထိပျဘကျမှာ ပွောငျးလိုကျပါတယျ။
Google Trips မှာလဲ အဖွူရောငျကို အဓိကထားသုံးထားပွီး search bar ကိုထိပျမှာ ထားရှိပေးထားပါတယျ။ ခုလိုဒီဇိုငျးပွောငျးထားတာတှကေို user တှထေဲဘယျခြိနျရောကျမယျ ဆိုတာကိုတော့ သသေခြောခြာပွောပွ ထားခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ Google ကတော့ သူ့ရဲ့ ဒီဇိုငျးအသဈတှကေို နောကျထှကျရှိမဲ့ Android P မှာ အသုံးပွုဖို့အတှကျ ပွငျဆငျနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နောကျထှကျရှိမဲ့ Google Pixel3မှာစတငျထညျ့သှငျးအသုံးပွုမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Posted on May 7, 2019 May 7, 2019 Author Ko Nyi
လက်ရှိ အိုင်ဖုန်းများမှာ သုံးနေတဲ့ Liquid Crystal Polymer (LCP) Antennas များဟာ လိုင်းဆွဲအား အကန့်အသတ်များ ရှိသလို ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစားရိတ်က မြင့်မားပါတယ်။ Apple အရေး ကျွမ်းကျင်တဲ့ Ming-Chi Kuo က iPhone 11 မှာ လိုင်းပိုမိမယ့် အန်တင်နာ နည်းပညာ အသစ်ပါမယ်လို့ သတင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ထုတ် အိုင်ဖုန်းများမှာ အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ PI Antenna နည်းပညာ အသစ်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုတာပါ။ PI Antenna များကတော့ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစားရိတ် သက်သာသလို စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားကြပါတယ်။ iPhone 11 က အခြား ကိရိယာများကို ကြိုးမဲ့ အားသွင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာလည်း မကြာခင်က […]
Zawgyi Version Wear OS ကို ထုတ်လုပ်သူတွေက နည်းနည်းလောက်သာ သဘောကျပေမယ့်လည်း Google ကတော့ သူ့ရဲ့ OS ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ batch မှာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ထားတာကတော့ Google Assistant ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကကြေညာထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အခုဆိုရင် Wear OS ကို ရောက်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် third-party devices နဲ့ apps တွေကို အသံနဲ့ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက smart suggestions တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ မေးခွန်းကိုမေးလိုက်တာနဲ့ Assistant က အဖြေပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ နောက်ထပ် conversation တွေကိုလည်း suggestion တွေ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထားပါတော့ […]
Posted on August 7, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)
Zawgyi Version ဒီနေ့ကတော့ Android ဖုန်းစီးရီးတစ်ခုအတွက် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့နေ့လိုဆိုရမှာပါ။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တည်းက စတင်ပြီးတော့ Android ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Nexus တွေအတွက်ကတော့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ It’sasad day for one of the most beloved series of Android phones. For the first time since 2009, there’sanew version of Android, but it’s not being made available to Google’s own Nexus devices. Android 9.0 Pie ကို […]
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Drone က တစ်နှစ်ကြာ မရပ်မနား ပျံသန်းနိုင်